I-Apple ifuna ukuba usebenzise i-iPhone yakho endaweni yesitshixo semoto nguNFC | IPhone iindaba
I-Apple ifuna ukuba ukwazi ukusebenzisa i-iPhone yakho endaweni yesitshixo semoto yi-NFC
UToni Cortés | | Izaziso
Ngalo lonke ixesha kukhutshwa uhlobo olutsha lwe-iOS, kukho abantu abazinikezele ekufuneni ngaphakathi ukuze bafumane iindaba ezifihliweyo. Ke siye safumanisa amanqaku amatsha acwangciswe ngu-Apple kwinkqubo yokusebenza, ngaphambi kokuba inkampani ibhengeze.
Izolo eyokuqala Inguqulelo ye-iOS 13.4 beta. Ngesixhenxe emva kwemini, ixesha leSpanish, njengesiqhelo. Kuphela kweyure kamva sinazo iindaba malunga nomsebenzi omtsha ofihlwe ngaphakathi: CarKey. Ngelo gama, awunyanzelekanga ukuba ube nguSherlock Holmes ukuba uqashele ukuba yintoni na. UApple ufuna ukuba sijonge njengoJames Bond kungekudala ...
Kubonakala ngathi iApple ithatha amanyathelo okuqala okwenza i-iPhone okanye iApple Watch isebenze njengesitshixo esifanelekileyo sesithuthi. Ayisiyomarhe ivela Kuo, kodwa i-API ebizwa ngokuba yi "CarKey" ifunyenwe izolo ngaphakathi kwinguqulelo entsha ye-beta ye-iOS 13.4. Le API inokusetyenziswa kunye neemoto ezinoluhlobo oluthile lwenkxaso yeNFC.
Ngokuqinisekileyo ngale API ICarKey iya kuba nakho ukuyivula imoto, uyiqale, kwaye uphinde uyitshixe. Inkqubo efanayo naleyo sele ikho ngokubizwa ngokuba zii-smart keys ezibandakanya izithuthi ezininzi. Umahluko kukuba amaqhosha akhoyo ngoku asebenza rhoqo kwisikhululo sikanomathotholo, kwaye le nkqubo intsha inokusebenzisa umthetho olandelwayo ongenazingcingo weNFC.
Umahluko ophawuleka kwinkqubo ye-Apple Pay's NFC, umzekelo, yileya ICarKey iyakusebenza nokuba iselfowuni icinyiwe. Ayamkelekanga into yokuba awukwazi ukusebenzisa imoto yakho ukuba i-iPhone yakho iphelelwe yibhetri. Lo msebenzi sele usetyenziswa kunye neKhadi leTransit Express yaseMelika. Ukubhangiswa kwenziwa ngeWallet app kunye naleyo yomenzi wemoto.
Ungabelana ngeCarKey yakho nabanye abantu, ubamema ngeWallet, kwaye utshintshe ukuba ufuna amalungelo ayo. Unokunika ukufikelela kwisithuthi komnye umsebenzisi, kodwa ngubani ongenakuyiqala, umzekelo. Umbono olungileyo, ngaphandle kwamathandabuzo.
I-Apple lilungu elisekayo kwiConsortium yoQhagamshelo lweMoto. Iqela lobuchwephesha beenkampani ezininzi ezipapashe kwi-2018 imigangatho yokuqala yokuKhutshwa kweDijithali yokunxibelelana kwee-smartphones kunye nezithuthi ngeNFC. Oko, kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza anikezelwe kwinkampani malunga nokudityaniswa kwe-iPhone nezithuthi ngeBluetooth kunye ne-Ultra-Wideband, kusikhokelela ekucingeni ukuba kungekudala sizakushiya isitshixo semoto esigcinwe kwibala lobusuku, ecaleni kwe impepha zokuqhuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple ifuna ukuba ukwazi ukusebenzisa i-iPhone yakho endaweni yesitshixo semoto yi-NFC
Iindaba zokuqhekeka kweemoto kwi-3,2,1 ..
Andiboni nto intsha, bendivula iAudi A1 yam nge-iPhone ukusukela nge-Agasti ka-2019
Ukusondeza iselfowuni emnyango?
Hayi, nditsho nasekhaya
Ewe kunjalo, njengoko benditshilo ukuba ndiyenzile kwinqaku lam. Ngenxa yoko ufuna imoto yakho ibe nonxibelelwano lwe-intanethi, ke kuya kufuneka uhlawule kwaye ubuye ube kwindawo yokugubungela. Zama ukuyenza kwindawo yokupaka kawonkewonke imigangatho emi-4 phantsi komhlaba.
Yinkqubo eyahluke ngokupheleleyo, yenziwa ngokusondela, njengaxa uhlawula ngekhadi letyala. Yinto eyongezelelekileyo.
Ilungelo lomenzi elithetha ngeTouch ID kwiApple Watch
I-Samsung Buds + ye-Samsung iya kuhambelana ne-iPhone